Newton, ny mpitantana ny mailaka dia nohavaozina amin'ny endriny vaovao | Vaovao IPhone
Newton, ny mpitantana ny mailaka dia nohavaozina amin'ny endrika vaovao maro
Miverina isika anio miaraka amin'i Newton (CloudMagic taloha), iray amin'ireo mpitantana mailaka matanjaka indrindra eny an-tsena ary ahafahantsika mitantana ny mailaka ataontsika. Satria tsy azo atao raha tsy izany, raha jerena ny vidin'ny famandrihana azy dia hitantsika fa manavao ny tenany hatrany i Newton, manampy endri-javatra vaovao ary mamaha ireo olana miafina. Amin'ity indray mitoraka ity, Nahazo fanavaozana maraina avy tany Newton izahay ary andao jerena izay vaovao sy izay vaovao ary amboary izany.. Andao isika hankany amin'izay miaraka amin'ireo fiasa farany ireo, indrindra raha tsy mahay teny anglisy ianao, satria ireo mpiara-miasa amin'i Newton dia tsy misahirana mandika ireo naoty fanavaozana amin'ny teny Espaniôla.
Ny zavatra voalohany dia ny manonona fa Newton sy Instapaper dia natambatra hatramin'ny farany, namorona fiaraha-miasa izay antenain'izy ireo hahazoana fampisehoana marobe. Raha ny momba ireo fiasa vaovao tafiditra, dia afaka mametraka lisitry ny lahasa miandry hatrany amin'ny fikitihana iray izahay. KOA ho afaka hamonjy ho azy ao amin'ny Instapaper ireo rohy ampidirin'ny mailaka izahay rakitra elektronika hovakiana manaraka.
Araka ny fantatrao tsara, i Newton dia misy kisary «tsy tia» hanamarihana spam, raha ny filazan'ireo mpamolavola, nihatsara be io fampiasa io. Farany, nohatsaraina ny lahatsoratra manankarena ao anaty boaty ny mailaka.
Namela lavaka hamahana olana koa izy ireo, indrindra ny fampandrenesana dika mitovy, ny olan'ny fandefasana amina fitaovana sasany ho an'ny mailaka Gmail, lesoka rehefa mamafa na mamindra rakitra marobe ary ny olana amin'ny fisintomana PDF avy amin'ny Google Drive.
Ny toa tsy namboarin'izy ireo dia ny motera fikarohana mampalahelo azy ireo, Mety ho lasa asa sarotra ny fanatanterahana ny fikarohana amin'ny alàlan'ny teny rehetra amin'ny mailaka anay, indrindra raha toa ka Outlook ilay nampifandraisinay. Raha fintinina, tsy misy zavatra tonga lafatra.
Newton Mail - App amin'ny mailakamaimaim-poana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Newton, ny mpitantana ny mailaka dia nohavaozina amin'ny endrika vaovao maro
Fangatahana telo hivezivezy eran'ny tanàna amin'ny alàlan'ny fitateram-bahoaka